Manchester City oo qaab ka duwan PSG ugu dhaqaaqeysa saxiixa Lionel Messi
Home Horyaalka Ingiriiska Manchester City oo qaab ka duwan PSG ugu dhaqaaqeysa saxiixa Lionel Messi
Manchester City ayaa lagu soo waramayaa inay dooraneyso waddo ka duwan tan Paris Saint-Germain oo ku aadan baacsiga weeraryahanka Barcelona Lionel Messi .
Xiddiga reer Argentine ayaa sii joogaya bilooyinkiisii ​​ugu dambeeyay ee heshiiskiisa Blaugrana waxana la filayaa in uu ka dhaqaaqo xagaagan kooxda, ilaa uu ka ogolaado in uu heshiis cusub u saxiixo Barcelona wakhtigaas ka hor.
Man City iyo PSG ayaa loo maleynayaa inay yihiin labada meel ee kaliya ee macquul ah ee loogu talagalay ciyaaryahanka lixda jeer ku guuleystay abaalmarinta Ballon d’Or, kaasoo lagu heli lahaa bilaash.
Dhowr xubnood oo ka tirsan shaqaalaha PSG ee ciyaaraya iyo kuwa aan ciyaareyn ayaa ka hadlay rajada uu Messi ka qabo inuu u dhaqaaqo Parc des Princes dhawaan – taatikada la sheegay inay keentay inay Barcelona ka carooto falcelintiisa .
Natiijo ahaan, ESPN ayaa ku wargalisay in City ay doorbideyso inay si aamusnaan ah u guda gasho ganacsigooda iyo lasoo wareegitaanka xidigan, waxayna durbaba la xireereen asxaabtiisa Messi ka hor dalab la filayo xagaaga ama xagaaga danbe.
Musharaxa madaxweynaha Barcelona Joan Laporta ayaa xaqiijiyay in Messi uu durbaba dalabyo ka helay “kooxo dhoor ah”, iyadoo PSG lagu soo waramayo inay 33 milyan oo ginni isbuucii mushaar ahaan u siineyso xidigan.
Messi ayaa shabaqa soo taabtay 17 jeer tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan, waxaana uu ka soo kacay kursiga keydka si uu Barcelona ugu hogaamiyo guushii ay ka gaareen Real Betis axadii.
Previous articleZinedine Zidane ayaa diiday inuu damaanad qaado inuu noqon doono tababaraha Real Madrid xilli ciyaareedka soo socda
Next articleLiverpool oo xiriir rasmi ah la sameysay Xidiga kooxda Sporting Lisbon ee Pedro Goncalves’